फेरि बढ्यो हवाई भाडा, कति पुग्यो ? – PathivaraOnline
Home > बिजनेस > फेरि बढ्यो हवाई भाडा, कति पुग्यो ?
admin November 15, 2021 बिजनेस, समाचार 0
काठमाडौँ । इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका छन् ।
वायुसेवा सञ्चालकहरुको छाता सङ्गठन वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै हवाई भाडामा जोड्ने इन्धनको शुल्कमा अधिकतममा रु २२० वृद्धि गरिएको जनाएको छ । निगमले हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर रु ५ मूल्य बढाएको थियो । सोही अनुरुप वायुसेवा कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका हुन् ।
यसरी बृद्धि भएको भाडादरअनुरुप अब काठमाडौँबाट सबैभन्दा लामो दूरीको धनगढी गन्तव्यका लागि रु २२० बढेको छ । सङ्घका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर हवाई इन्धनको मूल्यमा हवाई भाडा वृद्धि गरिएको छ ।
आजैदेखि यो भाडादर लागू गरिएको छ । काठमाडौँबाट हुने पर्वतीय उडानमा भने इन्धनमा लाग्ने शुल्क रु १७० बढेको छ ।
सर्वियासँग पोर्चुगल हारेपछि यसरी रोए रोनाल्डो…
अत्यन्तै दुखद खबर : उड्न लागेको विमान ह्याङ्गरमा अल्झियो, सबै यात्रुको मृत्यु (भिडियोसहित)
रोजिताको मृत्युले रोकिएन बिमलको आशु, घटनाको कारण खोज्दै दुवै परिवार
पैसा अभाव भएपछि रंगशाला बनाउन धुर्मुसले गरे सबैसँग यस्तो अपिल (भिडियो)